Cuisine ejwayelekile ye-Genoese - Trattoria Vegia Zena
Kusukela ngoLwesibili kuya ngeSonto:
Cuisine ejwayelekile ye-Genoese - Trattoria "Vegia Zena"
Ukunambitheka Kwendabuko Yendabuko Cuisine endaweni Yesimo.
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-81)
Cuisine ejwayelekile ye-Genoese egameni ubuqiniso yilokho uzothola at I-Trattoria "Vegia Zena", enye yezindawo zomlando ezaziswa kakhulu zedolobha hhayi kuphela ngemvelo yokwamukela kanye nensizakalo, kodwa ngaphezu kwakho konke izitsha ezijwayelekile Isiko lesikhumba di Genoa okuthi lapha, ngawo wonke ama-akhawunti, kufinyelela i Ubuhle Bangempela.
Cuisine ejwayelekile ye-Genoese e- "Vegia Zena" Trattoria - Yonke imiqondo yokunambitha eGenoa
Cuisine ejwayelekile ye-Genoese: ucebile izibiliboco zangempela nezihlwabusayo nobuhle. Izibiliboco ezilungiselelwe a Genoa nsuku zonke ngokuhlonipha isiko lendawo kusuka I-Trattoria "Vegia Zena". Lokhu I-Trattoria ejwayelekile itholakala endaweni ethandwa kakhulu ngababili beGuinea nabavakashi abaningi nabahambi, phambi kwabadumile I-aquovaum kaGenova, ngqo endaweni yokuqhekeka ephambene nomlando Ukulayisha Isikwele futhi inezilungiselelo zezindawo ezingama-80 ezibolekayo ngokwayo Ama-Banquets - Amaqembu - ama-Baptism - ama-dinner webhizinisi. Emakamelweni amathathu anomoya opholile endaweni eyamukelayo negciniwe, egxotshelwe esimweni sokunambitheka nesiko, unganambitha konke okusemqoka Izinhlobo zohlobo lweGeneseese neLigurian ehambisana nakho konke namaWayini Ahamba Phambili, alandelwa ngabasebenzi abaqeqeshiwe abazokwazi ukutolika kahle zonke izidingo zakho.
I-Typical Genoese Cuisine - I-Trattoria Vegia Zena ikunikeza izitsha ezinhle kakhulu neziqiniso kunazo zonke
La Cuisine ejwayelekile ye-Genoese, ngenxa yemenyu ecebile futhi ehlukahlukene, imelelwa kahle yi UTrattoria "Vegia Zena" eGenoa. Imenyu ecebile ye Okukhethekile okujwayelekile kokudla kwase-Ligurian, ngaphandle kwalokho IGenovese, yicetshiswe ngezitsha ezenzelwe Izinhlanzi ezintsha ezijabulisa ulwanga lwamakhasimende athembekile noma abahambi abadlula nsuku zonke. Phakathi kwezifundo eziningi, kufanele kushiwo: Ama-Lipstick ahlanganisiwe - uSole - Rhombuses - uGallinelle, ungaphuthelwa i frisceu ye-Cod ilungiswe yisazi izandla Chef in Batter crispy, izitsha at I-Pesto nge-Basil entsha evela ku-Pra nezitsha ezidumile ezisekelwe IStofish e buridda.
I-Typical genoese Trattoria: Ubuchule beGastronomic egameni lesiko laseLigurian
Insiza ye UTrattoria Vegia Zena inikezwe kubasebenzi abaqeqeshiwe kakhulu abaya kumakhasimende ngendlela ehlukile kwizikimu ezijwayelekile, okuhloswe ngayo ukuba nobungane nosizo ngenkathi kulondolozwa umoya wokwamukela okungekho emthethweni obeka noma yiluphi uhlobo lwamakhasimende ngokukhululeka ngazo zonke izikhathi; izifundo zilungiswa ngezandla ezinamakhono zalowo Izinga labapheki futhi zihlala zibonakala zingathandeki - buka nje izithombe - izithako ezisezingeni eliphakeme nezinhlobonhlobo zeMenyu bese wenza okunye, okwenza le ndawo ibe ngesinye sezindawo ezaziwa kakhulu futhi ezaziswa endaweni.
"Vegia Zena" - Izinhlobo ezejwayelekile zeGeneseese neWayini Cellar
ILiguria yaziwa hhayi ngo- Ukudla kwendabuko, kodwa futhi ngenxa ye Ukukhiqizwa kwewayini kufanelekile ukuqaphela: imivini ye-autochthonous idumile ngempela. Lapho Trattoria Vegia Zena eGenoa iqhosha eyodwa IWayini emsamo amaLiguri amaqiniso agcinwe kahle futhi abongiwe; ngaphezu kweewayini lendawo yokuqhakambisa, kukhona amabhodlela emikhiqizo edume kakhulu ahamba kahle nezitsha zeGeneseese Typical Cuisine okuyindawo le nkulumo enhle. Ukuthi uvakashele uZinhle idolobha laseGenoa, noma ngabe ufuna ukugubha izikhathi ezibalulekile zempilo yakho: ama-ezikhumbuzo - izidlo zebhizinisi - ukubhabhadiswa njll. noma ngaphezulu umane nje ufuna leyo "ndawo" eseduze lapho ungachitha khona amahora ajabule ekuphumuleni okuphelele ngenkathi ujabulela ukunambitheka okuhle kakhulu Izinhlobo ezejwayelekile zeGeneseese neLigurian, I-Vegia Zena iqinisekisiwe njengokukhetha kwezinga lokuqala.
Ikheli: IVico del Serriglio 13 - 15 R
I-POSTAL CODE: 16124
Ucingo: 010 2513332
Umakhala ekhukhwini: 388 4741195
Inombolo ye-VAT: 02096940990